ဒေးဗစ်လား ပျောက်ဆုံး မှု (၂၄) နာရီ ပြည့် ပြီ (ဒေးဗစ်လား ဘယ်ရောက်နေ ပြီလဲ?) – Let Pan Daily
ဒေးဗစ်လား ပျောက်ဆုံး မှု (၂၄) နာရီ ပြည့် ပြီ (ဒေးဗစ်လား ဘယ်ရောက်နေ ပြီလဲ?)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည့် ဒေးဗစ်လားသည် Hotel Quarantine မှ ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းအား Quarantine ထား ရှိခဲ့သည့် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်မှ City Hotel Yangon အား မေ ၁၁ ရက် ညနေ ငါးနာရီက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် ရာတွင် ဟိုတယ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“သူက ညတုန်းက Check out (မေ ၁၀ ရက်ည) လုပ်သွား တယ်။ သူက Check Out လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ ဟိုတယ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့” ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားပါတယ်။ မေ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့် တွင်လည်း ဟိုတယ်အား ထပ်မံ ဆက်သွယ်ရာ ဒေးဗစ်လား ဟိုတယ်ကထွက်သွားပြီ ဆိုသည်ကိုသာ ထပ်မံဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေးဗစ်လားသည် Hotel Quarantine ရက်ပြည့်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ် ခဲ့ခြင်း ဟုတ် မဟုတ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများကို ဆက်သွယ်ရာတွင် လတ်တလော သိရှိသေးခြင်း မရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“အဲဒါကို ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဗျ။ ဒီနေ့က အစည်းအဝေးတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် သိတာနဲ့ ပြန်ပြောမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဘာသတင်းမှ မပို့သေးဘူး။ ကျွန်တော် မေးတာလည်း ဘယ်သူမှ မဖြေဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သေချာ မသိသေးဘူး။ တိုင်းကျန်းမာရေးကို ဖုန်းဆက်တာလည်း မကိုင်သေးဘူး။ တစ်ခါတည်း တိုင်း ကျန်းမာရေးကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါလား” ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောကြားပါတယ်။
“အဲ့ဒီကိစ္စဘာမှ မသိသေးဘူး။ Check Out လုပ်သွားတယ် ဆိုရင်လဲ သူ့ဘာသာ တာဝန်ယူလိမ့်မယ်။ Quarantine ပြည့်တယ် မပြည့်ဘူးက ကျန်းမာရေးကို မေးမယ်။ ကျန်းမာရေးက ခွင့်ပြုလို့ Check Out ထွက်သွားတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးက ဆက်ပြီးတော့ ရှေ့ ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စတွေကို ဆောင် ရွက်လိမ့်မယ်” ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လဝကနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ပြောကြားပါတယ်။
ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက တိုင်း ကျန်းမာရေးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် ပြောကြားသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပေ။
COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြား ချက်များအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ဦးစောကွယ်ဝါး (သင်းအုပ်ဆရာ)၊ အမှုတော်ဆောင် ဦးစောရေဂန်ဒီ၊ ဦးစောဒေဗစ် (ခ) ဦးစောဒေးဗစ်လား (တရားဟော ဆရာ)နှင့် ဦးဝေထွန်း (နဝရတ် တေးသံသွင်း) တို့လေးဦးအား ရောဂါဖြစ်ပွား စေနိုင်သည့် လူစုလူဝေးပြု လုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အင်းစိန်မြို့မရဲစ ခန်းနှင့် မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းတို့တွင် သဘာဝဘေး ပုဒ်မ ၂၅ ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမူဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ သည် မည်သူမဆို ဆန်းစစ်ချက် မပြုလုပ်ဘဲ ပေါ့ဆစွာ ဆောင်ရွက်မူတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်စေ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လျှင် သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန် အကြောင်းရှိလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရက သဘာဝဘေး အန်တရာယျ ကာကှယျရေး ဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့ထားသညျ့ ဒေးဗဈလားသညျ Hotel Quarantine မှ ထှကျသှားပွီဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးအား Quarantine ထား ရှိခဲ့သညျ့ ဗိုလျတဈထောငျမွို့နယျမှ City Hotel Yangon အား မေ ၁၁ ရကျ ညနေ ငါးနာရီက ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျ ရာတှငျ ဟိုတယျ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
“သူက ညတုနျးက Check out (မေ ၁၀ ရကျည) လုပျသှား တယျ။ သူက Check Out လုပျမယျဆိုပွီး ထှကျသှားတာ ဟိုတယျပွောငျးသှားတာဖွဈရငျလညျးဖွဈမှာပေါ့” ဟု တာဝနျရှိသူတဈဦးကပွောကွားပါတယျ။ မေ ၁၂ ရကျ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲခနျ့ တှငျလညျး ဟိုတယျအား ထပျမံ ဆကျသှယျရာ ဒေးဗဈလား ဟိုတယျကထှကျသှားပွီ ဆိုသညျကိုသာ ထပျမံဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
ဒေးဗဈလားသညျ Hotel Quarantine ရကျပွညျ့သဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့ ပွုလုပျ ခဲ့ခွငျး ဟုတျ မဟုတျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးမြားကို ဆကျသှယျရာတှငျ လတျတလော သိရှိသေးခွငျး မရှိကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
“အဲဒါကို ကြှနျတျောမသိသေးဘူးဗြ။ ဒီနကေ့ အစညျးအဝေးတှေ ရှိတယျ။ ကြှနျတျော သိတာနဲ့ ပွနျပွောမယျ။ ကြှနျတျောတို့ဆီကို ဘာသတငျးမှ မပို့သေးဘူး။ ကြှနျတျော မေးတာလညျး ဘယျသူမှ မဖွဘေူး။ ကြှနျတျောတို့ သခြော မသိသေးဘူး။ တိုငျးကနျြးမာရေးကို ဖုနျးဆကျတာလညျး မကိုငျသေးဘူး။ တဈခါတညျး တိုငျး ကနျြးမာရေးကို ဆကျသှယျကွညျ့ပါလား” ဟု ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေးဝနျကွီး ဦးနိုငျငံလငျးက ပွောကွားပါတယျ။
“အဲ့ဒီကိစ်စဘာမှ မသိသေးဘူး။ Check Out လုပျသှားတယျ ဆိုရငျလဲ သူ့ဘာသာ တာဝနျယူလိမျ့မယျ။ Quarantine ပွညျ့တယျ မပွညျ့ဘူးက ကနျြးမာရေးကို မေးမယျ။ ကနျြးမာရေးက ခှငျ့ပွုလို့ Check Out ထှကျသှားတယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးက ဆကျပွီးတော့ ရှေ့ ဆကျဆောငျရှကျမယျ့ ကိစ်စတှကေို ဆောငျ ရှကျလိမျ့မယျ” ဟု ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ လဝကနှငျ့ လူ့စှမျးအား အရငျးအမွဈဝနျကွီး ဒျေါမိုးမိုးစုကွညျက ပွောကွားပါတယျ။
ယခုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး လူမှုရေးဝနျကွီး ဦးနိုငျငံလငျးက တိုငျး ကနျြးမာရေးသို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးရနျ ပွောကွားသဖွငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့ထံ ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့သျောလညျး ဆကျသှယျ၍ မရခဲ့ပေ။
COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ညှနျကွား ခကျြမြားအား လိုကျနာရနျ ပကျြကှကျခဲ့သညျ့ ဦးစောကှယျဝါး (သငျးအုပျဆရာ)၊ အမှုတျောဆောငျ ဦးစောရဂေနျဒီ၊ ဦးစောဒဗေဈ (ခ) ဦးစောဒေးဗဈလား (တရားဟော ဆရာ)နှငျ့ ဦးဝထှေနျး (နဝရတျ တေးသံသှငျး) တို့လေးဦးအား ရောဂါဖွဈပှား စနေိုငျသညျ့ လူစုလူဝေးပွု လုပျဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးအပျေါ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျစီမံခနျ့ခှဲမှုဥပဒအေရ အငျးစိနျမွို့မရဲစ ခနျးနှငျ့ မရမျးကုနျးမွို့မရဲစခနျးတို့တှငျ သဘာဝဘေး ပုဒျမ ၂၅ ဖွငျ့အမှုဖှငျ့ထားပါတယျ။
သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမူဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ သညျ မညျသူမဆို ဆနျးစဈခကျြ မပွုလုပျဘဲ ပေါ့ဆစှာ ဆောငျရှကျမူတဈခုခုကွောငျ့ ဖွဈစေ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဖွဈပျေါလြှငျ သို့မဟုတျဖွဈပျေါစရေနျ အကွောငျးရှိလြှငျ ထိုသူကို သုံးနှဈထကျမပိုသော ထောငျဒဏျခမြှတျရမညျ့အပွငျ ငှဒေဏျလညျး ခမြှတျနိုငျကွောငျး ဥပဒတှေငျ ဖျောပွထားပါတယျ။